Zvipfeko zveCuba, ndezvipi zvipfeko zveCuba? | Absolut Kufamba
Susana Maria Urbano Mateos | | Kiyuba
Kana iwe uchifunga kuenda kuCuba zvirokwazvo pane zvinhu zvakawanda zvaunofanira kufunga pamusoro pekunge matikiti endege, pekugara, nzvimbo dzekufarira, nezvimwe.
La mbatya nguo Iyo yakakosha kwazvo kwete chete nekuti iri nyika ine inodziya mamiriro ekunze, asi nekuti chimwe chinhu hunhu uye mumiriri wevanhu veCuba.
1 Ndeapi mbatya dzekupfeka muCuba?
2 Chaicho cheCuba chipfeko chevakadzi
3 Zvipfeko zveCuba kana iwe uri murume
4 Kupfeka sei pamapati muCuba
Ndeapi mbatya dzekupfeka muCuba?
Zvinogona kutaurwa kuti iyo "Kodhi yekodhi" Chiyero chekupfeka muCuba chine zvipfeko zvakajairika zvakagadzirwa kubva kukotoni. Uye sezvatatotaura, iri nyika ine mamiriro ekunze anotonhora, mbatya dzakanaka uye dzakareruka ndidzo dzinonyanya kukodzera. Ndokunge, zvakanakisa kusarudza zvipfeko zvakagadzirwa nemwenje uye machira echisikigo senge mucheka nedonje zvakare.
Jeans uye T-shirts akakodzera chero nguva yegore kunze kwaNyamavhuvhu, kana kunze kuchipisa uye kwakanyorova. Iwe unofanirwa kuziva kuti chitsuwa chakatonhora nemhepo yemhepo inovhuvhuta kazhinji, saka zvinokurudzirwa kurongedza juzi rakareruka kana hembe-refu-maoko kune iwo anotonhorera husiku.
Izvo zvakakoshawo kuti iwe uzvione izvo mamwe maresitorendi muCuba haangatenderi kupfeka zvikabudura. Zvakare funga kuti iyo migwagwa nemigwagwa hazvina kuenzana, izvo zvinoreva kuti iwe uchazoda shangu dzakagadzikana kushanyira nzvimbo dzekufarira.
Vamwe shangu dzakatsetseka kana shangu dzakanaka Vanozoshanda zvirinani kupfuura shangu dzemitambo sezvo yekupedzisira ichigona kuchengetedza tsoka dzako kudziya. Chekutanga pane zvese, zvinogara zvichikurudzirwa kuti uunze sunscreen yako uye inodzinga zvipembenene, pamwe nezvimbuzi, zvigadzirwa zvehutsanana hwevakadzi, pamwe nekuzora. Izvi zvinodaro nekuti ivo vanowanzo kuve anodhura kusvika pachitsuwa.
Chaicho cheCuba chipfeko chevakadzi
Ehezve, zvipfeko zveCuba izvo vakadzi vanofanirwa kupfeka zvakasiyana nezvavaizofanira kupfeka muguta rakaita seNew York semuenzaniso. Naizvozvo, kana iwe ukaronga kuenda kuCuba uye unakirwe nekugara kwako zvizere, kanganwa nezvemashure marefu uye sarudza kupfeka shangu dzakapetanas, shangu kana dzakagadzikana ballerinas.
Mumahotera nemaresitorendi, vakadzi vanowanzo pfeka kudya kwemanheru mune yakapfava isina tambo uye neshangu, chimwe chinhu chakanakira husiku hunodziya mumaguta seHavana Zvinokurudzirwawo kushandisa chidimbu chakachinjika chinonzi pashmina chinogona kupfekwa pamusoro pechimwe chipfeko, chakasanganiswa nezvishongo zvekupfeka.
Chimwe chinhu chakakosha kufunga ndechekuti kuCuba kune machechi mazhinji, makedhedral uye nzvimbo dzezvitendero. Naizvozvo, kana iwe uchironga kushanyira nzvimbo idzi, izano rakanaka kuvhara mapfudzi ako nemakumbo kuti urambe uchienderana nerudzi rwehembe muCuba iyo inowanzo shandiswa.
Zvipfeko zveCuba kana iwe uri murume
Mune varume chipfeko chakajairika cheCuba ndiyo "Guayabera". Chipfeko chakakurumbira uye chetsika pachitsuwa ichi, icho chinomiririra kugadzirwa neshinda, kazhinji chiri chena uye zvakare nemagadzirirwo kana machira anomupa akasiyana maitiro. Iko kune akapfupika-akapfekedzwa uye akareba-magirazi guayabera, ayo ese akapfekwa kunze kwebhurugwa.
Vanowanzove nehomwe mbiri kana ina kusvika kumberi, pamwe nemitsara miviri yeteki pachipfuva, pamwe nemitatu kumashure uye mabhatani. Vanogona kuwanikwa mumarudzi akasiyana siyana, asi iyo chena guayabera ndiyo yakajairika nekuti iri nyore, nyowani uye yakajeka. Varume vacho Iwe unogona kusanganisa iyi yekuCuba yekufuka nerineni kana yakapfava donje bhurugwa, ine moccasin-mhando yakavharwa shangu mune yakajeka shades, kunyanya kune zvepamutemo zviitiko.
Kupfeka sei pamapati muCuba
Pachivanhu, mapato nemhemberero zvakajairika muCuba. Munguva zhinji yegore mhemberero dzinoverengeka dzinopembererwa uyezve kune nguva dzose mapato akazvimirira, michato, chirairo chekutanga, etc. Vakadzi vanogona kupfeka iyo yechinyakare rumba rokwe kuona mweya wechokwadi wekunakidzwa uye ruvara pausiku hweCuba. Zvakajairika kuti rudzi rwejasi reCuba rishandiswe, mune ino kesi iri yechinyakare mhando yezvipfeko zvevakadzi zvinowanzo shandiswa kumafaro uye kumwe kupemberera.
Chimiro chehunhu hwekupfeka kweCuba ndiyo vara, iyo iripo kunyanya mumadhirezi evakadzi. Asi iwe unogona zvakare kuwana mbatya, kunyanya hembe dzemarudzi akasiyana evarume. Kana zviri zvekushandisa, ngowani pfupi-brimmed dzevarume dzinowanzo shandiswa pamwe chete neguayabera nemabhurugwa emucheka. Vakadzi kazhinji vanopfeka madhirezi marefu anotonhorera uye akasununguka.
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti ino inyika ine inodziya mamiriro ekunze mazhinji egore. Naizvozvo, kuenda kuCubaZvinokurudzirwa kupfeka hembe dzakakodzera kuti unyatsonakidzwa nekugara kwako pachitsuwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zvipfeko zveCuba, zvipfeko muCuba
Mary Rose akadaro
Mhoroi, ini ndinoronga kufamba kubva kuArgentina kuenda kuCuba pakupera kwaKurume, kutanga kwaKubvumbi, mazuva gumi nematatu ... Ndinoda kuziva kuti ndeapi mbatya nembatya dzandinofanira kupfeka ....
Pindura kuna maria rosa
biank mar akadaro
Zvinondibatsira pabasa rinoshanda ... NDATENDA
Pindura biank mar
Amai vakaisa mafoto chaiwo. Hapana anopfeka ipapo senge iwo mafoto
Iwo akanakisa masango emvura muMadrid